Ii-Athilethi ze-East London Ironman zimemelela inkxaso eyongezelekileyo – Elitsha
1st April 2017 GroundUpEast London, Edition 14, Iyavela 0 Xhosa
Ukukwazi ukuzithengela ibhayisekile kwakunye nokufunda ukuqubha yeminye yemingeni ejongene ne-Athileti zaselokishini.
UBusisiwe Sintili ominyaka ingama-27 ubudala uhlala eDuncan Village. Uthi akazange waphosa ukuthatha inxaxheba kugqatso lokubaleka kwidolophu yakhe. Kodwa, xa kwakuqhubeka ugqatso lweStandard Bank Ironman, uSintili uphele ebukela kuphela kuba akanayo ibhayisekile kwaye akakwazi ukuqubha.
Olu gqatso belunezibakala ezithathu (ezibalwa ngokweemayile): kuqalwe ngokuqubha iimayile eziyi-1.2 (1.9km) kunxweme lolwandle iEast London Orient, kwalandela ugqatso lweebhayisekile oluzimayile ezingama-56 (90.1 km) kwaze kwagqityelwa ngokubaleka umgama ozimayile ezili-13 (21.1km). Uwonke lo mgama uqobayo ubungama-70.3 eemayile (113.1km).
Iziko lendaba iSABC linike ingxelo yokuba ugqatso lwamadoda luphunyelelwe yindoda yaseFransi, uRomain Guillaume lwaze olwabafazi lwaphunyelelwa nguJodie Cunnama waseUK okwesihlandlo sesixhenxe zilandelelana.
“Akukho madama okuqubha kawonke-wonke kwilokishi yam apho ndinokufunda khona ukuqubha kwaye andikwazi ukukhwela ibhayisekile kuba zange ndabanayo,” utshilo uSantili. Kungcono ukubaleka kuba akufunisi zinto zininzi. Nangona ngamanye amaxesha nokubaleka kunazo iingxaki. Kwindawo endihlala kuyo ungakhuthuzwa okanye udlwengulwe, ngoko ke andikwazi ukuzilolonga ebusuku.”
USikelela Kakele oneminyaka engama-25 ubudala waseMdantsane usebenza njengonogada wabantu abaqubhayo ngamaxesha athile onyaka. Ukwangumqeqeshi olivolontiya kwiziko lokuzilolonga lasekuhlaleni. Uye walugqiba ugqatso lwe-Ironman, kodwa wachaza iingxaki anazo ekuthatheni inxaxheba kule migqatso. “Omnye umngeni endinawo umalunga nokuzilolonga. Kufuneka nditye ukutya okukodwa ukuze ndiqhube kakuhle kugqatso ngalunye kodwa ke andikwazi ukufikelela kuko ngokwezemali. Ngenxa yoko ke ndibanjwe zinkantsi kulo lonke olu gqatso,” uchaze watsho. Kokwesithathu engenela olu gqatso lwe-Ironman.
Nangona eyinxalenye yeqela leBuffalo City lwezizibakala zintlandlo ntathu elifumana isibonelelo kugqatso ngalunye, uthi imali yesibonelelo ayanelenga. “Inceda kakhulu ukusifaka kugqatso, ukuhlawula umrhumo wokubhalisa, ukusinika ibhayisekile kunye nesuti yokudada. Kodwa yonke enye into uyazifunela. Kuninzi okusafuneka kwenzelwe i-Athileti ngokungakumbi ezo zifana nam zingaqeqeshwanga,” utshilo.
Also read: Imbongi yaseRhini isebenzisa isiXhosa ukufikelela ebantwini
Uthe uye wakulungela kabini ukungenela ukhuphiswano lweentshatsheli lehlabathi kodwa akakwazi ukuya ngenxa yokungabikho kwemali yesibonelelo. Kulo nyaka uye wakulungela okwesithathu ukungena kukhuphiswano lweentshatsheli loMzantsi Afrika. Ufuna ukuya kukhuphiswano lweentshatsheli lwehlabathi kulo nyaka kwakunye nokuqeqesha abantu abatsha abanomdla kwezemidlalo.
UMasipala weBuffalo City uxelele iGroundUp ukuba umisele i-ofisi entsha yophuhliso lwezemidlalo. Usomlomo kaSodolophu, uAyabulela Ngoqo uthe isixeko sisebenzisana noluntu, izikolo kunye neeklabhu ukuphuhlisa ezemidlalo ezilokishini nakwiindawo ezisemaphandleni.